Vacuum dog syndrome - ဖြေရှင်းနည်းနဲ့ပြAနာ Dogs World
El လေဟာနယ်ခွေး syndrome ရောဂါ ၎င်းသည်မြေပြင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်လက်လှမ်းမမီနိုင်သောမည်သည့်အရာကိုမဆိုစားရန်ခွေး၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောအလေ့အထကိုလူသိများသောအမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခွေးများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသောအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များတွင်ဖြစ်တတ်ပြီးထည်၊ သစ်၊ ပလတ်စတစ်၊ အရုပ်စသည်တို့ကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ၎င်းပစ္စည်းများသည်အတွင်းပိုင်းထိခိုက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ပြင်းထန်သောကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်သည်အပြုသဘောဆောင်သည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ တစ်နေ့တာကိုခွေးတစ်ကောင်နှင့်မျှဝေခြင်းသည်မိသားစုအတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ဘဝ၏အဆင့်တိုင်းအတွက်သီးခြားလက္ခဏာများရှိသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရှိသည်ကလေးငယ်များအတွက်ကစားစရာနှင့်အကာအကွယ်မှတက်ကြွစွာနေထိုင်မှုပုံစံများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏သစ္စာရှိအဖော်များဖြစ်သောတွဲဖက်လက်ပ်တော့များအတွက်တက်ကြွခြင်းအထိဖြစ်သည်။
1 လေဟာနယ်ခွေး Syndrome ၏အဓိပ္ပါယ်
2 ဖြစ်နိုင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းများ
4 လေဟာနယ်ခွေး Syndrome ရှောင်ရှားရန်ဘယ်လို?
လေဟာနယ်ခွေး Syndrome ၏အဓိပ္ပါယ်
ဒါဟာအကြံပြုသည် တစ် ဦး ချင်းစီဖောက်၏ထူးခြားမှုကိုသိနှင့်ခွေးပညာပေး မိမိအခွေးတစ်ကောင်သဘောသဘာဝမျက်မှောက်ဆုံးရှုံးမပါဘဲအပြုသဘောအားဖြည့်အတူ။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုသင်မည်မျှပင်ညှိုးနွမ်းစေချင်သည်ဖြစ်စေသင်၏ဗီဇကိုမမေ့သင့်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကျန်းမာသန်စွမ်းသောသဘာဝအခြေအနေများကိုမလေးစားသင့်ပါ။
မရရှိလျှင်ကလေးငယ်ကဲ့သို့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုသည့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်နှင့်သင်ဆက်ဆံရဖွယ်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမြေသည်မိမိတို့ပိုင်နက်နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး၎င်းတို့သည်အစားအစာအဖြစ်ထိမိလဲစေသည့်မည်သည့်အရာသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိုမဆိုစားသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒီရောဂါကို Vacuum Dog Syndrome လို့ခေါ်တယ်။ ခွေး၏ကျန်းမာရေးအတွက် ပြောင်းလဲ၍ မရသောအကျိုးဆက်များကိုမထုတ်ယူမီချက်ချင်းကုသသင့်သည်။
ခွေးများသည်မစင်များကိုစားသည်သို့မဟုတ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်သောပစ္စည်းများကိုစား မိ၍ မူးယစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အဆိပ်သင့်ခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဤအပြုအမူအားခွေးပေါက်စများတွင်တွေ့ရှိရန်ပိုမိုနားလည်နိုင်သည်၊ သို့သော်ချက်ချင်းမတည့်ပါကလူကြီးများအထိထိုအလေ့အထကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ လူမျိုးအားလုံးသည်ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်သည်သို့ရာတွင်၊ Retrievers, Beagles နှင့် Golden Retrievers များသည်ပိုမိုလွယ်ကူလွယ်ကူသည်ကိုလူအများသိထားကြသည်။
ဒီအပြုအမူ၏မူလအစမွေးမြူရေး၏ပထမသုံးလအတွင်းအမြစ်တွယ်နှင့်ဤကာလအတွင်းကခွေးပေါက်စမိခင်နှင့်နီးစပ်သောဆက်လက်အရေးကြီးသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ မိခင်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ခွေးသည်အစာကျွေးရန်သင်ယူလိမ့်မည် နှင့်၎င်း၏ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအာမခံသောအရသာပုံစံကိုခွဲခြား။
သူတို့ကိုနို့ဖြတ်ခြင်းနှင့်မိခင်နှင့်အတူပထမလမှသူတို့ကိုဆုံးရှုံးငယ်ရွယ်ဖို့နက်ရှိုင်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမညီမျှမှုကိုဆောင်တတ်၏။ အကယ်၍ ခွေးကလေးသည်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆိုမိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းတွင်ရှိရမည် စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်မှန်ကန်သောအာရုံကို မျိုးပွားသူများကသူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှတမှုကိုသေချာစေရန်၊ လူအများစုကသတိမထားမိသော်လည်းခွေးများသည်လည်းစိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရပြီးသူတို့၏ပိုင်ရှင်၏ခံစားချက်များကိုအလွန်အမင်းလက်ခံသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်မတည်ငြိမ်သောပိုင်ရှင်မှသင်သူ့ကိုမသင့်လျော်သောကုသမှုပေးသောကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကရောဂါလက္ခဏာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရှိသည် သင်၏ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ၊ ကာယလှုပ်ရှားမှုများ၊ အစာစားခြင်းအလို့ငှာနှင့်အာဟာရလိုအပ်ချက်များနှင့်မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်သောတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုတို့ကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်ကျန်းမာသောသဘောထားများကိုထင်ဟပ်ပြလိမ့်မည်။
အစောပိုင်းနှင့်မှန်ကန်သောပညာရေး လူမှုရေး မိသားစုဝင်များနှင့်အတူရပ်ရွာနှင့်အခြားအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုရှောင်ကြဉ်လိမ့်မည် စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်အာရုံကြောအဆင့်များလက္ခဏာများ ၎င်းသည်လူသိများသည့်အတိုင်း Aspirator ခွေးသို့မဟုတ်ယားနာ၏ရောဂါလက္ခဏာကိုအာရုံစိုက်ရန်သူတို့ကို ဦး တည်စေသည်။
အချို့လည်းရှိပါတယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများထက်ပိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီအခြေအနေကိုတင်ပြဖို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ ယင်းတို့တွင်သံသို့မဟုတ်သွေးအားနည်းရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ hypothyroidism၊ ကပ်ပါးကောင်များ၊ အစာအိမ်အကျိတ်၊ အာဟာရချို့တဲ့မှုနှင့်အာဟာရမညီမျှမှုတို့ပါဝင်သောအခြားပြproblemsနာများပါဝင်သည်။
ဤရောဂါ၏အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များတွင်ဖြစ်ပွားသောအကျိုးဆက်များသည်အစာရှောင်ခြင်းအစာရှောင်ခြင်းမှအူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း၊ အဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့်အဆိပ်သင့်ခြင်းအထိအလွန်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်အားနည်းလာခြင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးသည်လည်းပိုမိုဆိုးရွားလာသည် အဆက်မပြတ်အစာခြေရောဂါများ၊ အန်ခြင်းနှင့်ဝမ်းလျှောခြင်းများကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ အူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုများ၏အမှု၌အသုံးအများဆုံးမြင်နိုင်လက္ခဏာနမူနာဖြစ်ပါတယ် နာကျင်ခြင်းနှင့်အော့။ ထိုကိစ္စတွင်သင်သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုအဓိကအားဖြင့်ဓာတ်မှန်ရိုက်ပေးမည့်တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်ထံအလျင်အမြန်သွားသင့်သည်။ အဆီးအတားကိုသက်သေပြပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွင်ချိန်ခွင်လျှာကိုပြန်ထားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလိမ့်မည်။
အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့်အကြောင်းအရင်းများကိုချက်ချင်းစစ်ဆေးရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအရေးယူမှုများပြုလုပ်ရမည်။ ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့သင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည် အန်ခြင်း၊ အစာအိမ်ဆေးခြင်းအထိသင့်လျော်သောကုသမှု။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်မူးယစ်ဆေးစွဲပြီးသေစေနိုင်သည့်အချိန်ကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်အကြိမ်များစွာမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်လေဟာနယ်ခွေးရောဂါခံစားနေရသည့်နောက်ထပ်အနီရောင်အလံတစ်ခုဖြစ်သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ဆိုးရွားပြင်းထန်သောအသက်ရှူခြင်းကိုခံစားနေရသည်သူသည်ပုံမှန်သွားနှင့်သွားတိုက်နေသည့်တိုင် အကျိုးဆက်များမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာအကြောင်းရင်းများကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရန်ဖြစ်သည်။
လေဟာနယ်ခွေး Syndrome ရှောင်ရှားရန်ဘယ်လို?
အစပိုင်းတွင်အရေးအကြီးဆုံးအရာမှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်မွေးပြီးကတည်းကကျန်းမာသန်စွမ်းသောဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်သည်။ မိခင်နှင့်အတူဘဝ၏ပထမသုံးလအလွန်အရေးကြီးသည်ဆက်လက်ရှိနေရမည်။ ခွေးတစ်ကောင်မှပညာရေးသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ခွေး၏အပေါ်မူတည်။ ကြောင့်ပိုမိုသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသတ်မှတ်ခေါင်းဆောင်မှုဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူပိုင်ရှင်တွေလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်မှာလုံးဝအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တာဝန်ခံသူနှင့်ပတ်သက်။ ရှုပ်ထွေးရှိသည်အကြံပြုသည်မဟုတ်။ အခြားသူများထက်ပိုပြီးလွတ်လပ်သောဝတ်ရည်ရှိပါတယ် ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မွေးစားတစ် ဦး ယုံကြည်စိတ်ချရသောခေါင်းဆောင်အဖြစ်မိမိကိုမိမိစည်းကြပ်ကြောင်းလိုအပ်သည်။
အကယ်၍ ခွေးတွင်ရောဂါရှိပါက၎င်းကိုသူအားရောဂါလက္ခဏာပျောက်ကင်းစေရန်နည်းလမ်းများသည်အနည်းငယ် ပို၍ ဆိုးရွားသွားလိမ့်မည်။ ပထမတော့အရမ်းဖြစ်ရမယ် လက်လှမ်းမမီအတွင်းကျန်ကြွင်းသောအရာဝတ္ထုနှင့်အတူသတိထားပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ် ဦး နှာခေါင်းပေါ်တွင်တင်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားရန်ကန ဦး ခြေလှမ်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာရှာဖွေရန်ဖြစ်သည် တိရိစ္ဆာန်ဆရာနှင့်ခွေးသင်တန်းဆရာတို့ကအကြံပြုသောမဟာဗျူဟာများ သူတို့ရဲ့ပညာရေးကိုကူညီနိုင်တယ်။ အကယ်၍ ဤအဆင့်ကိုမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုမစားနိုင်ဘဲပိုင်ရှင်၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲမည်သည့်အစာကိုမျှမစားသုံးနိုင်စေရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
အစားထိုးကုထုံးသည်ဥပမာ - ၀ ယ်ခြင်းကဲ့သို့အလွန်ထိရောက်နိုင်သည် မင်းကိုဖျော်ဖြေပေးတဲ့ကစားစရာတွေဝါးပြီးစိုးရိမ်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးတယ်။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်နည်းဗျူဟာကိုအောင်မြင်စွာသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်ရောဂါလက္ခဏာ၏အကြောင်းရင်းကိုအတိအကျသိရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ မူလအစသည်အာဟာရချို့တဲ့မှုဖြစ်လျှင်၎င်းသည်၎င်း၏တန်ဖိုးများကိုဟန်ချက်ညီစေရန်လုံလောက်သောအစားအစာကိုပေးသင့်သည်။ သင်၏သိမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းများပိုမိုလုပ်ခြင်းသည်လည်းအကြံပြုနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ရောဂါများ » ဖုန်စုပ်ခွေးရောဂါ